Aiza no Misy ny Lay? - Henry B. Eyring
Ilay lay izay toa manakana ireo fanampiana avy any amin’Andriamanitra dia tsy mandrakotra an’Andriamanitra saingy mandrakotra antsika kosa indraindray. Tsy miafina na oviana na oviana Andriamanitra, kanefa isika dia miafina indraindray.
Tao anatin’ny fahoriany lalina tao amin’ny fonjan’i Liberty, dia nihiaka i Joseph Smith Mpaminany hoe: “Andriamanitra ô, aiza no misy Anao? Ary aiza no misy ny lay izay mandrakotra ny toerana fiafenanao?”1 Maro amintsika rehefa ao anatin’ny fahorian’ny tenantsika manokana, no mahatsapa fa lavitra antsika Andriamanitra. Ilay lay izay toa manakana ireo fanampiana avy any amin’Andriamanitra dia tsy mandrakotra an’Andriamanitra saingy mandrakotra antsika kosa indraindray. Tsy miafina na oviana na oviana Andriamanitra, kanefa isika dia miafina indraindray, rakotry ny lain’ireo famporisihina izay mitarika antsika hanalavitra an’Andriamanitra ary mahatonga azy ho toa lavitra sy tsy azo atonina. Ny fanirian’ny tenantsika manokana fa tsy ilay fahatsapana hoe: “Hatao anie ny sitraponao,”2 dia miteraka ny fahatsapana fa misy lay manakona an’Andriamanitra. Afaka mahita antsika sy mifandray amintsika foana Andriamanitra, saingy mety tsy vonona ny hihaino na hanaiky ny sitrapony sy ny fotoany isika.
Ny fahatsapantsika ho tafasaraka amin’Andriamanitra dia hihena rehefa mihalasa toy ny zazakely eo anatrehany isika. Tsy mora izany rehefa manana fiantraikany toy izany eo amin’ny fahavononantsika ireo hevitry ny olombelona hafa eto amin’ity tontolo ity. Saingy hanampy antsika hahafantatra ity fahamarinana ity izany, manao hoe: Akaiky antsika sy mahalala ny fisiantsika Andriamanitra ary tsy miafina velively amin’ireo zanany mahatoky.
Ny zafikeliko vavy telo taona dia naneho ny herin’ny tsy fananan-tsiny sy ny fanetren-tena mba hampifandray antsika amin’Andriamanitra. Nandeha niaraka tamin’ny fianakaviany hamonjy ny varavarana misokatra tao amin’ny Tempolin’i Brigham City ao Utah izy. Nijery ny manodidina izy tao amin’ny iray tamin’ireo efitra tao amin’izany trano tsara tarehy izany ary nanontany hoe: “Neny a, aiza i Jesoa?” Nazavain’